“Sustainable Solutions. Smart Irrigation. ” - Potatoes News
“Sustainable solutions. Kudiridza kwakanaka. ”
Iyo indasitiri yezvekurima - inosanganisira ese mbatatisi uye emadiridziro maindasitiri - ave nemugove wayo wezvinetso zvekukunda mugore rapfuura. Kubudikidza nesimba uye kugadzikana, maindasitiri edu akakwanisa kuchinjika nekuwana mhinduro kumamiriro ekunze uye kukunda zvipingamupinyi izvi, uye kubuda sekusimba uye kwakakosha. Gore rino, Irrigation Association (IA) iri kuenderera mberi nedingindira iri rekutsvaga mhinduro sezvo richigadzirira Mwedzi weKudiridza weSmart.
Dingindira ra2021 reSmart Irrigation Mwedzi rinoti “Smart irrigation. Mhinduro dzinogoneka. ” Mumwedzi wese waChikunguru, IA nenhengo dzayo vachange vachikurudzira mashandisiro ekushandisa matekinoroji nemaitiro ekudiridza ari kupa mhinduro kumatambudziko ezuva ranhasi neramangwana muindasitiri yemadiridziro.
Kugadziriswa kwakawanda munzvimbo dzekurima dzakawanda indasitiri zvikamu. Irrigation innovation inotungamira nzira nekuwedzera kuyedza kuunza nhanho nyowani yekusimudzira iyo ichave nemhedzisiro iri kure kupfuura yedu indasitiri. Chinangwa chedu ndechekuti basa ratinoita haringokutsigire chete, sechikamu chakakosha cheindasitiri yekugadzira chikafu, asi kuti zvakare inotsigira ramangwana redu rakabatana nekushandisa zvakanaka mvura yemadiridziro, chimwe chezvinhu zvedu zvakakosha zvikuru.
Smart Irrigation Mwedzi mushandirapamwe weiyo indasitiri unoitwa wega wega Chikunguru kuti uwedzere kuzivikanwa kwekukosha kwekushandisa kwemvura uye kukura kudiwa kwezvigadziriso zvemvura, maitiro uye masevhisi. Gore rega rega, chirongwa ichi chinowedzera kukura uye zvirinani, maindasitiri eag achibatana mukuparadzira meseji nezvekukosha kwenzira dzekudiridza dzinobudirira uye kusimudzira maitiro avo ehunyanzvi ekudiridza uye matekinoroji.
Heano maitiro aunogona kutora chikamu uye kutora chikamu mune Smart Irrigation Mwedzi. Iwe haufanire kuve nhengo yeIrrigation Association, kunyangwe ini ndichikurudzira kufunga nezve kujoina. Smart Irrigation Mwedzi ndeyekuti munhu wese atore chikamu nekupembera.
Chipiri chekutanga chaChikunguru chakasarudzwa seTechnology Chipiri. Sechikamu cheiyi kickoff kune Smart Irrigation Mwedzi, iwe uchaona avo vari muindasitiri vakapfeka bhuruu muna Chikunguru 6. Joinha isu uye pfeka bhuruu paTechnology Chipiri kuratidza rutsigiro rwako rwekudiridza kwakanaka. Tumira mifananidzo yako pasocial media ne #smartirrigationmonth kuti uve chikamu cheiyi bhuruu wave.
IA inopa maturusi ku www.machumXNUMXsc.org kuti iwe ushandise kuratidza kuti iwe uri mutungamiri pakati pevezera rako mukuratidzira maitiro ekudiridza akangwara, matekinoroji akachenjera uye zvigadzirwa zvakangwara. Shandisa zvishandiso izvi pasocial media, pamwe neiyo Smart Irrigation Mwedzi logo, kuratidza maitiro ako ekurima akangwara.
Tinokukurudzirawo kuti ubatanidzwe nenhepfenyuro yako yemuno, kugovana nhau nezve bhizinesi rako kana mashandiro ekurima, uye utaure kuti sei uchipemberera Mwedzi Unodiridza weSmart muna Chikunguru. Tora chinzvimbo chemurevereri weindasitiri yako nekutaura kune vako vanodzora nevamiriri vemitemo. Vakoke kuti vashanyire purazi rako uye vagoona mhinduro dzako dzakanakisisa dzokudiridza. Vabvunze kuti vapemberere Mwedzi Wokudiridza weSmart. Nekuti kudiridza kwakanaka kunogona kuenderana nezvakatipoteredza, zvemagariro uye zvehupfumi, pamwe nekusimudzira, iwe uchashamisika kuti vangani vatungamiriri vehurumende vachazoda kubatana mukugovana meseji iyi.
Unoda kudzidza zvakawanda here?
Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezve matekinoroji ekudiridza nehungwaru nemaitiro, tinokukurudzira kuti utishanyire uyu Zvita 6-10 pa2021 Irrigation Show & Svondo Yekudzidzisa muSan Diego. Ku Irrigation Show iwe unozogona kwete chete kudzidza nezvezvazvino matekinoroji uye maitiro ekudiridzira, asi zvakare dzidza kubva kune nyanzvi nezvekuti ingwara sei idzi dzekudiridza matekinoroji ari kuita mutsauko. Kuti udzidze zvakawanda nezve Irrigation Show, shanya www.irrigationshow.org.
Apo patinobatana pamwechete kupemberera Smart Irrigation Mwedzi uno waChikunguru, ngatirangarirei kuti kudiridza kwakanaka hakutangi musi waChikunguru kana kupera munaChikunguru 1. Tinofanirwa kupemberera kudiridza kwakanaka uye nemhinduro dzisingaperi dzainounza mugore rese. Ngatishandei pamwe chete kukura mikana iripo kwete kwete chete kushandisa aya akanakisa maitiro asiwo kuvhenekera mwenje pavari senzira yekudiridza inofanira kuitwa. Zvishandiso zvinowanikwa pa www.machumXNUMXsc.org uye www.irrigation.org zvakanaka zvinotanga kuita kuti izvi zviitike.
Jon Topham ndiye mukuru anoshanda pa Irrigation Dhizaini & Kuvaka LLC muPatterson, Calif., uye akapfuura mutungamiri weIrrigation Association.
Kupemberera Sustainable Solutions
Tags: kudiridza hurongwaMbatatisi kudiridzaNemazvo Irrigationakangwara zvekurima
Israeli yekutanga SupPlant: sensor-shoma kudiridza system
Hunhu mbatatisi yeIndia
Varimi veWashington mbatatisi vari kunetseka kuti vachengetedze zvinodiwa